Cayaaryahankii Hore Ee Man United Javier Hernandez Oo Sabab La’aan Guurkiisa Maalmo Ka Harsanaa U Bur Buriyay! - Hablaha Media Network
Cayaaryahankii Hore Ee Man United Javier Hernandez Oo Sabab La’aan Guurkiisa Maalmo Ka Harsanaa U Bur Buriyay!
HMN:- Cayaaryahankii hore ee kooxda Manchester United Javier Hernandez (Chicharito) ayaa sabab la’aan la sheegay inuu guurkiisa maalmo ka harsanaa u bur buriyay.
Javier Hernandez oo haatan u cayaaro naadiga Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka ka dhisan ayaa la sheegay in jaceylkiisa Lucia Villalon guurkooda maalmo ka harsanaa balse haatan wax walbo ay bur bureen.
Lucia Villalon waa gabbar Spanish joornaaliste ah qorshahana wuxuu ahaa inay Javier la aqal gasho todobaadka ugu dambeeyo bishaan Maarso.
Chicharito iyo Lucia Villalon ayaa is barteen xiligii uu xidigaan dalka Spain ku sugnaa oo uu kooxda Real Madrid amaah kula joogay.
Waxaa la sheegay in jaceylkooda labada sano iyo bar soo socday lagu waday in bishaan dhamaadkeeda laga noqo mid rasmi ah oo ay aqal galaan, inkastoo la sheegay in bilawgii sanadkaan lamaanahan mar isku dhaceen hadana midaas looma fileyn in guurkooda bur burin karto.
Laakiin Javier Hernandez ayaa taageerayaashiisa la wadaagay aqbaartaan naxdinta leh madaama uu sheegay inay Lucia Villalon kala hareen sidoo kalena bishaan uusan aqal gali doono wax walbana dhamaad leeyihiin!
Xidigaan qoraalada uu baraha bulshada soo dhigay waxaa ka mid ah “Wax walbo gadaal looma fiiriyo sababna lagama keeno, horey u soco, naftaadana weydii maxaa kuu diiday markale isku day inaad sameysid!!”
Chicharito hadana qoraal kale ayuu soo dhigay baraha bulshada oo uu ku leeyahay “Waxaad ka cabsaneysaa in lagu dhaawaco, waxaana hubaal ah in nafsadaada aad adiga dhaawaceysid cabsi aad qabtid awgeed, dhoola cadeey sidoo kalena kalsooni la imaaw marwalbo!!”
Hernandez oo Mexican ah iyo Villalon xagaagii hore ayay faraanti isku galiyeen laakiin wax walbo haatan sabab la’aan ama sharaxaad dheeri ah oo aysan bulshada la wadaagin ayay xirirkooda kusoo idleeyeen halkii guur laga filaayay.
Javier Hernandez xili cayaareedkan 2016/17 kooxdiisa Bayer Leverkusen wuxuu u cayaaray 32-kulan asigoo u dhaliyay 12-gool dhamaan tartamada kala duwan.